Manualidades On ndeye webhusaiti yakatsaurirwa kune iyo nyika yeiyo DIY matinopa mazano mazhinji ekushongedza uye epakutanga mazano kuti iwe uzviite iwe pachako. Kuti ikubatsire iwe, timu yewebhu inoumbwa nevanhu vaneshungu vanoda kugovana ruzivo rwavo uye hunyanzvi munyika yehunyanzvi.
El Edhisheni timu yeCrafts On inoumbwa nevanyori vanotevera asi kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chayo, usazeze ku tinyore isu kuburikidza neinotevera fomu:
Sezvo ini ndichigona kuyeuka ini ndakada kugadzira nemaoko angu: kunyora, kupenda, kuita hunyanzvi ... ini ndakadzidza nhoroondo yehunyanzvi, kudzoreredza uye kuchengetedza uye ikozvino ndatarisana nenyika yekudzidzisa. Asi munguva yangu yekusarudzika ini ndichiri kuda kugadzira uye izvozvi kugona kugovera zvimwe zvezvisikwa izvi.
Ndiri mudiwa mukuru wekugadzira uye hunyanzvi kubva paudiki hwangu. Nezve zvandino farira, ndinofanira kutaura kuti ndiri munhu asingatenderi akatendeka uye mapikicha, asi ndinodawo kudzidzisa hunyanzvi hwangu kuvana nevakuru. Zvinonakidza kugona kuita zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa nemaoko edu uye nekuona kureba kwedu kusvika.
Ini ndinogadzira nemasikirwo, ndinoda zvese zvakagadzirwa nemaoko uye ndinofarira zvekudzokorodza. Ini ndinoda kupa hupenyu hwechipiri kune chero chinhu, kugadzira uye kugadzira zvese zvaunogona kufungidzira nemaoko angu. Uye pamusoro pezvose, dzidza kushandisa zvekare sehukuru hwehupenyu. Chirevo changu ndechekuti, kana chisingachakushandire, chishandise zvakare.
Hapana chinopa kugutsikana kupfuura kuona yako wega yapera hunyanzvi. Chinhu chinonakidza uye chekugadzira. Tarisa kuunganidzwa kwangu uye tanga kudzidzira hunyanzvi hwako. Iwe uchave nekuputika!
Ini ndinonzi Marian, ndakadzidza kushongedza uye dhizaini yemukati. Ini ndiri munhu anoshingaira anofarira kugadzira nemaoko angu: kupenda, kunama, kusona ... Ndakagara ndichifarira hunyanzvi uye ikozvino ndinovagovana newe.
Bachelor yeMimhanzi Nhoroondo uye Sayenzi, yechinyakare gitare mudzidzisi uye diploma muMimhanzi Dzidziso yekudzidzisa. Kubva ndichiri mudiki ndanga ndave nechido cheumhizha. Ruvara ndeimwe yemazita angu ekuzivikanwa. Ini ndinoita tutorials padandemutande kuitira kuti vanhu vazhinji vagovane kwavo kuda kwekugadzira neni.
Munyori, mupepeti uye mhizha yeblog uye YouTube chiteshi "El Taller de Ire", ichigadzira zvemukati nezve DIY, hunyanzvi uye hunyanzvi. Nyanzvi mumasikisi, kugadzira zvigadzirwa zvehunyanzvi neiyi nzira yezvishongo zvezvitoro, uye muvhu repolymer uye bundu rinoshanduka, kugadzira nekushanda kweanopfuura makore maviri eJumping Clay
Ndakagara ndichifarira zvemhizha sezvo ini ndichizviona semunhu akasika. Zvinondifadza kuti nezvishoma zviwanikwa iwe unogona kuita zvinhu zvikuru.
Kubva kuRosario, kuArgentina, ndakatanga netsaona kuti ndigadzire zvemukati mewebhu ini ndichiita degree rangu remutemo. Ini ndinoda hunyanzvi kubva pazera diki kwazvo, uye gara uchivapa hupenyu hwechipiri kune izvo zvaizoraswa.
Ndiri munhu ane simba, anoshanda uye anokwanisa kuita zvinhu zvakasiyana-siyana. Ini ndinoda kunyora nekupa zvandinogadzira kuBlog, nekuti nenzira iyoyo, ndinovagovana neavo vakaita seni vane hukama hwehunyanzvi.
Kugadzira zvakasikwa, uye fungidziro inoita kuti tigadzire. Ndinovimba kuti zvisikwa zvangu zvinokupa mazano, uye zvinobata kugadzirisa hupenyu hwako. Nekuti kana tiri mumba medu, tinotarisira kuona kuratidzwa kwekutaura zvatiri.